प्रेमबारे प्रदीप गिरी र राम कार्की : आइ लभ यू भन्दा पूँजीवाद !
बिहिवार, फाल्गुन ८, २०७६ लुम्बिनी टाइम्स
बुटवल–बुधबार विपी कोइराला अध्ययन प्रतिष्ठान बुटवलले गरेको कार्यक्रममा कांग्रेसका प्रदीप गिरी, बालकृष्ण खाँडसँगै नेकपाका राम कार्की भनेर चिनिने सुरेन्द्र कुमार कार्की र राष्ट्रिय जनता पार्टीका राजकिशोर यादव वक्ताको रुपमा रहेका थिए।
तर प्रदिप गिरी र राम कार्कीको भाषणलाई उपस्थित भएकाले रोचक माने। गिरीभन्दा अघि बोलेका कार्कीले घर परिवारमा समाजवाद र पूँजीवादको व्याख्या गर्दै भने–‘तपाईको जोडीले आइ लभ यु मात्र अर्थात म प्रेम गर्छु मात्र भन्छन भने त्यो पूँजीवाद हो। आइ रेक्स्पेक्ट यु पनि भन्छन् भने त्यो समाजवाद हो। महिला साथीहरु बुझिराख्नुस्।’
उनले अगाडि भने–‘तपाइँको श्रीमानले ५० पटक लभ यु भन्छन् । तर तपाईको भनाइलाई, विचारलाई उसले रेक्सपेक्ट गर्छ कि गर्दैन। उसले रेस्पेक्ट गर्छ भने उ समाजवादी रोमान्टिज्ममा छ।’
राम कार्कीको यो भनाइप्रति प्रमुख वक्ता प्रदीप गिरीले भाषणको सुरुमै आफ्नो विचार राखे। अनि केही कुरा थपे। ‘कार्कीजीले जानेरै होला मानव जीवनमा लभ भन्दा रोचक विषय केही छैन भनेर लभका कुरा गर्नुभयो। हुँदाहुँदै उहाँले लभलाई प्रजातन्त्र र समाजवादसँग जोड्नुभयो।’
उनले कार्कीको कुरामा आफ्नो पूरा समर्थन रहेको बताए। कार्कीभन्दा अझ खुलेर कुरा गरे गिरीले–‘लभ भन्ने विषय साँच्चिकै रोचक भएकाले म पनि त्यहीँबाट कुरा सुरु गर्छु । पुरुष अपेक्षाकृत ज्यादा कामूक हुन्छ। उसले महिलालाई फकाउनुपर्यो, अझ प्रष्ट भन्दा वास्ना पूरा गर्नपर्यो भने आइ लभ यु भन्न थाल्छ । त्यो कुरा नपत्याउनुहोला । उसले तपाईँलाई प्रेम गर्छु भन्यो भने रतिराग गर्छु भनेको हो। भ्रममा नपर्नुहोला। खुलेरै भन्दिएँ नि मैले।’
राम कार्कीले भनेको रेस्पेक्टको कुरामा पनि प्रदिप गिरीले थपे–‘रेसपेक्ट शब्द बडा गहिरो शब्द छ। रेस्पेक्ट भनेको दोहोरो हेर्नु। तपाइँले श्रीमानलाई हेर्नु, श्रीमानले तपाईलाई हेर्नु ।’
गिरीले एकअर्काप्रतिको विचार बुझ्नु नै रेक्स्पेक्ट भएको उल्लेख गरे। ‘तत्कालीक बास्नाका आवेगमा आइ लभ यू भन्न सकिन्छ। बास्नाभन्दा प्रष्ट शब्द भन्नुपर्दैन होला। रेस्पेक्ट भनेको त्यसपछिको जीवन संघर्ष हो। चिनेको, भेटेको तथा सिन्दुर हालेको दिनदेखि उसको सम्पूर्ण जीवनचर्यालाई घोरिएर हेरेर उसका सम्पूर्ण कमीकमजोरी स्वीकार गर्नु रेस्पेक्ट हो।’
प्रकाशित मिति: बिहिवार, फाल्गुन ८, २०७६, ०४:३९:४४
मिस नेपाल २०२० को आवेदन खुला, कहाँ कहाँ हुँदैछ अडिसन ?
कस्तो प्रेमसम्बन्ध : वासनायुक्त कि निस्वार्थी
प्रेमका ११ प्रतीक, जो आफ्ना प्रियतमको नाममा बनाइए
आइ लभ यू नभनी लभ प्रपोज गर्ने आइडिया
मंगलवार, माघ २८, २०७६ एजेन्सी
मंगलवार, माघ १४, २०७६ लुम्बिनी टाइम्स